1 Samuel 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
15 Na Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Me na Yehowa somaa me ma mebɛsraa+ wo de wo sii ne man Israel so hene, enti tie Yehowa anom asɛm.+ 2 Nea asafo Yehowa+ aka ni, ‘Nea Amalek de yɛɛ Israel bere a wofi Egypt reba, sɛ́ wɔsɔre tiaa no wɔ kwan mu+ no, mɛma wɔatua wɔn so ka.+ 3 Enti kɔ na kokunkum Amalekfo+ na sɛe+ wɔne nea wɔwɔ nyinaa pasaa, nhu wɔn mmɔbɔ, kunkum wɔn nyinaa,+ ɔbarima ne ɔbea, abofra ne nea otua nufu ano,+ nantwi ne oguan, yoma ne afurum.’”+ 4 Ɛnna Saul frɛfrɛɛ ɔman no, na ɔkan wɔn wɔ Telaim,+ mmarima mpem ahanu a wɔnam fam ne Yuda mmarima mpem du.+ 5 Na Saul kɔe ara koduu Amalek kurow mu, na wɔkɔtetɛw subon no ho. 6 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ Kenifo+ sɛ: “Monkɔ,+ mumfi ha mfi Amalekfo mu nkɔ, na mampra mo amfra wɔn. Mo de, moyɛɛ Israelfo nyinaa adɔe+ bere a wofi Egypt reba no.”+ Enti Kenifo no fii Amalekfo mu kɔe. 7 Ɛno akyi no, Saul kokunkum Amalekfo+ fi Hawila+ kosii Sur+ a ɛwɔ Egypt anim no. 8 Ɔkyeree Amalek hene Agag+ animono, na ɔman no nkae de, ɔde nkrante kunkum wɔn nyinaa.+ 9 Na Agag ne nguan ne anantwi ne mmoa a wɔadɔ srade ne adwennini no mu nea eye ne nneɛma pa nyinaa, Saul ne ɔman no huu wɔn mmɔbɔ,+ na wɔampɛ sɛ wɔsɛe wɔn.+ Ade biara a ɛyɛ tan na enye mma hwee de, wɔsɛee ne nyinaa pasaa. 10 Ɛnna Yehowa asɛm baa Samuel nkyɛn sɛ: 11 “Manu me ho+ sɛ mama Saul ayɛ ɔhene, efisɛ wadan+ afi m’akyi, na m’asɛm nso, wanni so.”+ Asɛm no haw Samuel,+ na osu frɛɛ Yehowa anadwo no nyinaa.+ 12 Na Samuel sɔree ntɛm sɛ ɔrekohyia Saul anɔpa. Nanso wɔbɔɔ Samuel amanneɛ sɛ: “Saul baa Karmel,+ na hwɛ! wasi nkaedum+ ama ne ho, na wadan ne ho atwam asian kɔ Gilgal.” 13 Na Samuel koduu Saul nkyɛn, na Saul ka kyerɛɛ no sɛ: “O Yehowa nipa, nhyira+ nka wo. Mayɛ nea Yehowa kae no.”+ 14 Ɛnna Samuel bisae sɛ: “Na dɛn ne nguan sũ a egu m’asom ne anantwi sũ a mete yi?”+ 15 Na Saul buae sɛ: “Wɔde fi Amalekfo mu na ɛbae, efisɛ ɔman+ no huu nguan ne anantwi no mu nea eye no mmɔbɔ sɛ wɔde bɛbɔ afɔre ama Yehowa wo Nyankopɔn,+ na nea ɛkae no de, yɛasɛe ne nyinaa pasaa.” 16 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Gyae! Ma menka nea Yehowa ka kyerɛɛ me nnɛra anadwo nkyerɛ wo.”+ Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kasa!” 17 Ɛnna Samuel kae sɛ: “Ɛnyɛ bere a na woyɛ ketewa w’ani so+ no na wɔyɛɛ wo Israel mmusuakuw so panyin, na Yehowa sraa wo+ de wo sii Israel so hene? 18 Akyiri yi, Yehowa somaa wo sɛ kɔyɛ adwuma bi, na ɔkae sɛ, ‘Kɔ na kɔsɛe Amalekfo nnebɔneyɛfo+ no pasaa; wo ne wɔn nko nkosi sɛ wobɛtɔre wɔn ase pasaa.’+ 19 Ɛnde dɛn nti na woantie Yehowa nne, na woatu agu asade so+ ayɛ nea ɛyɛ Yehowa ani so bɔne yi?”+ 20 Nanso Saul ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Na sɛ́ matie+ Yehowa nne, na adwuma a Yehowa somaa me sɛ menkɔyɛ no, makɔyɛ, na mede Amalek hene Agag+ aba, na Amalek de, masɛe no+ pasaa. 21 Na asade a wɔaka sɛ wɔnsɛe no no mu nguan ne anantwi a eye paa no, ɔman+ no afa sɛ wɔde rebɛbɔ afɔre+ ama Yehowa wo Nyankopɔn wɔ Gilgal.”+ 22 Ɛnna Samuel kae sɛ: “Yehowa pɛ ɔhyew afɔre+ ne ayɛyɛde sen osetie a wɔbɛyɛ ama Yehowa anaa? Hwɛ! Osetie+ ye sen afɔre,+ na asoyɛ kyɛn adwennini srade,+ 23 na atuatew+ ne abosonkɔm+ nyinaa yɛ bɔne koro, na aniammɔho ne asumansɛm ne terafim+ ahonisom nyinaa yɛ ade koro. Esiane sɛ woapo Yehowa asɛm+ nti, ɔno nso apo wo sɛ nni hene.”+ 24 Na Saul ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Mayɛ bɔne,+ na mabu Yehowa ahyɛde ne w’asɛm so, efisɛ misuroo ɔman+ no, na mitiee wɔn nne. 25 Enti mesrɛ wo, fa me bɔne kyɛ me,+ na wo ne me nkɔ na menkɔkotow+ Yehowa.” 26 Nanso Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Me ne wo renkɔ, efisɛ woapo Yehowa asɛm, na Yehowa nso apo wo sɛ nni Israel so hene.”+ 27 Bere a Samuel dan ne ho sɛ ɔrekɔ ara pɛ na osoo n’atade nguguso ano, na esuanee.+ 28 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa asuan+ Israel ahenni no afi wo nsam nnɛ, na wo yɔnko a oye sen wo na ɔde bɛma no.+ 29 Na Israel Onuonyamfo+ no nso, ɔrenni atoro,+ na ɔrennu ne ho, efisɛ ɔnyɛ ɔdesani na wanu ne ho.”+ 30 Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Mayɛ bɔne. Na afei mesrɛ wo, hyɛ me anuonyam+ wɔ me man mpanyimfo ne Israel anim, na wo ne me nkɔ na menkɔkotow Yehowa wo Nyankopɔn.”+ 31 Enti Samuel dii Saul akyi ne no kɔe, na Saul kɔkotow Yehowa. 32 Ɛno akyi no, Samuel kae sɛ: “Momfa Amalek hene Agag mmrɛ me wɔ ha.” Na Agag de ehu kɔɔ n’anim, na Agag kae wɔ ne tirim sɛ: “Ampa, saa bere yi de, owu yaw atwam kɔ.” 33 Nanso Samuel kae sɛ: “Sɛnea wo nkrante+ maa mmea hweree wɔn mma no, saa ara na wo maame+ nso bedi mmasigyaw asen mmea nyinaa.”+ Samuel kaa saa no, otwitwaa Agag asinasin Yehowa anim wɔ Gilgal.+ 34 Na Samuel siim kɔɔ Rama, na Saul nso kɔɔ ne fie wɔ Saul kurow Gibea+ mu. 35 Na Samuel anhu Saul bio kosii ne wuda, efisɛ Samuel kodii Saul ho awerɛhow.+ Yehowa nso nuu ne ho sɛ ɔde Saul sii Israel so hene.+